Syria : Horonantsarin’ny famoretana tao Daraa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, 한국어, Español, عربي, Ελληνικά, русский, Français, македонски, Magyar, Italiano, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, polski, English
Mitohy ny famaizana ny fihetsiketsehana ao Daraa ary tsy mitsaha-mitombo ireo olona maty sy maratra, misy ny sary nalaina tao amin'ny YouTube an'ireo olo-tsotra mpaka-sary ao an-tanàna, YouTube izay tranokala vao noesorina vao haingana ny fanivanana azy tao Syria. Nalaina tamin'ny 23 martsa ireto horonantsary manaraka ireto izay mampiseho ny famoretana tao Daraa, tanàna atsimon'i Syrie.
Fampitandremana : ahitana sary mampihoro-koditra ny horonantsary sasany.
Amin'io horonantsary feno herisetra navoakan'i SHAMSNN io, niantso fiara mpitondra marary haka lehilahy iray vao avy voatifitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Tamin'ny voalohany, nahitàna olona telo nitsirara tamin'ny tany, avy eo maratra hafa no napoitran'ny fakantsary. Nisy ny feom-basy re. Nanantona ireo olona maromaro naratra mafy avy eo ny fakan-tsary.
Amin'io horonan-tsary io, izay mbola navoakan'i SHAMSNN ihany, nitondra olona iray naratra teny amin'ny arabe ireo mpanao fihetsiketsehana, no sady mahare fitifirana izahay :
Amin'ity horonan-tsary mitsatotsatoka ity, mbola mahare fitifirana ihany izahay, raha nanao filaharambe ireo mpanao fihetsiketsehana, : lehilahy iray no mihiaka hoe “Lehibe Andriamanitra!” avy eo nitsoropaka avy any ny baomba mandatsa-dranomaso ho ao anatin'ny vahoaka. Nalaina tao amin'ny Youtube an'i islam1tv:
Nalaina tamin'ny ny fandevenana ireo “maritiora” enina sy nandritra ny fanafihana vao maraimbe tao amin'ny moske Al Omari ny 23 martsa ity horonantsary ity. Niantsoantso ny vahoaka hoe : “Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra irery ihany, ary eo anilany ireo martiora!” Nalaina tao amin'ny Youtube navoakan'i islam1tv :
Amin'ity horonantsary ity, hita tsara ny famonoana faobe natao. Mitsirara amin'ny tany ireo vata-mangatsiaka ary tifirina ireo izay mbola mikofokofoka. Vondron'olona maromaro no miafina ao ambadiky ny fiara be mba hiaro tena tsy ho voatifitra. Nalaina tao amin'ny Youtube nataon'i SHAMSNN.